webadmin – Winner Japanese School
Phone: 09 894 575566
Email us: info@winnerjapaneselanguage.com
တိုးတက်လာမယ့်အနာဂတ်ကို ဖန်တီးပေးမယ့် ဆရာနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေခင်ဗျာ.
WINNER JAPAN SCHOOL မှာအတွေ့အကြုံများစွာရှိပြီးဦးစီးပြီးသင်ကြားပေးမယ့်ဆရာ အမည်ကတော့ ဦးကျော်ဇင်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကတော့ ဂျပန်မှာကိုယ်တိုင်ကျောင်းတက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဂျပန်နိုင်ငံမှရုံးအလုပ်များစွာကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်ကနေပြီးပေးအပ်တဲ့ စာသင်နိုင်တဲ့ ကျောင်းဆရာလက်မှတ်လည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.. ဂျပန်စာတစ်မျိုးထဲကိုပဲသင်ကြားပေးမှာမဟုတ်ဘဲ ဂျပန်နိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝ မျိုးစုံကိုလည်း ပြန်လည်မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကဂျပန်မှာတင်မဟုတ်ဘဲ မြန်မာပြည်မှာလည်း စာသင်တာ ၅နှစ်အထက်ရှိပါတယ် …. အတွေ့အကြုံများစွာရှိတဲ့ဆရာမှ ဂျပန်စာ N5 နဲ့ N4 ကိုသင်ကြားပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။...
Winner Japan School မှာတက်ရောက်ချင်တဲ့သင်တန်းသူသင်တန်းသားများအတွက် သတင်းကောင်းလေးလာပါပြီ
ဂျပန်စာလေ့လာချင်တဲ့သူတွေအတွက် N5 / N4 အတန်းခွဲများကို Winner Japan School မှာ အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့ စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါတယ် ….. -အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ သင်တန်းသားသစ်များလက်ခံမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖောင်များလာရောက်တင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ သတင်းကောင်းလေးကတော့ အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်မှ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်နေ့ထိလာရောက်အပ်နှံသူများကို သင်တန်းကြေး...
ငါ့ပုံစံနဲ့ ဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ ငါလုပ်နို်င်မှာ မဟုတ်ပါဘူးကွာ ငါနဲ့ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာ ဒီလိုပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့လူငယ်တွေ အလုပ်လုပ်ပြီး လစာမရသေးခင်မှာတင် ဂျပန်ကိုသွားဖို့အတွက် သင်တန်းကြေး၊ ကျောင်းလခ၊ လေယာဉ်လက်မှတ်ခ၊ ဘာခ ညာခတွေနဲ့တင် သိန်းဆယ်ဂဏန်းကနေ ရာဂဏန်းအထိ ကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီပမာဏလောက်ရှိတဲ့ငွေကို ဘယ်နားသွားရှာမလဲ။ ဒါ့အပြင် ဂျပန်ကိုရောက်သွားတယ် ထားဦးတော့။ အကျိုးဆောင်ခပေးရမှာတွေ၊ ဂျပန်အလုပ်ရှင်က လစာအပြည့်အဝမပေးတာတွေ၊...
ဂျပန်မှာ အလုပ်သွားလုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ဂျပန်စာ နဲ့ ဂျပန်စကားကတော့ မဖြစ်မနေသင်ရမှာပါနော်။ ဒါဆို ဂျပန်စာ နဲ့ ဂျပန်စကားကို ကောင်းကောင်းတတ်ဖို့လိုတာပေါ့။ အဲ့တော့ ဘယ်မှာသင်ရမလဲ? သင်တန်းရှိလား? ရှိပါ့ဗျာ။ Winner Japan School ပေါ့။ ဂျပန်စာ နဲ့ ဂျပန်စကားကို တတ်ကျွမ်းတဲ့အထိ ဆရာစားမချန်သင်ပေးမှာပါ။ ဂျပန်မှာအလုပ်သွားလုပ်မယ့်သူတွေအတွက်ပဲ သင်တန်းဖွင့်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ဝါသနာပါလို့ ဂျပန်စာကို လေ့လာချင်သူတွေအတွက်လည်း...
Agency Fee ပေးစရာမလိုတဲ့ Agency ဆိုတာ တကယ်ရှိလား။ မယုံနိုင်သေးဘူးမလား။ မယုံမရှိနဲ့။ တကယ်ပါ။ အပြင်မှာတကယ်ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မယ့် လူငယ်တွေရဲ့ အခက်အခဲကို အမှန်တကယ် သိရှိနားလည်ပြီး အကူအညီပေးမယ့် အေဂျင်စီနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်လို့ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လက်တွဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Winner Japan School ဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်မယ့် လူငယ်တွေအတွက် လိုအပ်တဲ့...
သင်ဟာ အိပ်မက်မက်သူလား? အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့်သူလား? သင်ဟာ အိပ်မက်မက်သူဆိုရင်တော့ ဆက်အိပ်နေလိုက်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲ အိပ်မက်တွေကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ချင်သူဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ Winner Japan School က သင့်အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ပါဝင်ကူညီပါရစေ။ ဂျပန်မှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့အတွက် ဘာလိုမလဲလို့ သင်မေးတော့မှာမလား။ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ တကယ်လုပ်ချင်စိတ်ပဲ လိုပါတယ်။ ကျန်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့တာဝန်ထားလိုက်ပါ။ အသေးစိပ်သိရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Messenger...
အောင်မြင်သူတွေဟာ အိပ်မက်ကြီးကြီးမက်ကြပါတယ်တဲ့။ သင့်ရဲ့အိပ်မက်ကရော ဘာလဲ။ 🤩 ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်မလို့လား? 💁‍♂️ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့က သင့်ရဲ့အိပ်မက်ဆိုရင် ဒီပို့စ်က သင့်အတွက်ပါပဲ။ Winner Japan School ဟာ လူငယ်တွေရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကူူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေပါပြီ။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ့်် လူငယ်တွေအနေနဲ့ Winner Japan School နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အိပ်မက်တွေကို...
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ အလုပ်သွားလုပ်ချင်တယ်။ ဘယ်ကဘယ်လို စလုပ်ရမလဲဆိုတာလေးပဲမသိတာ။ 🤷‍♂️ သင် ဒီ Post ကိုမြင်ပြီဆိုရင် မသိဘူးဆိုတဲ့စကားကို အခုကစပြီး ပြောဖို့မလိုတော့ပါဘူး
ဘာလို့လဲ? ကျွန်တော်တို့ကို မေးလို့ရတယ်လေ။💁‍♂️ ကျွန်တော်တို့ဆိုတာက? ကျွန်တော်တို့ဆိုတာက Winner Japan School ကိုဆိုလိုတာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့ ဂျပန်စာနဲ့ ဂျပန်စကားသင်ပေးပါတယ်။ ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ချင်သူတွေကို ဂျပန်ပို့ပေးပြီး ဂျပန်မှာ အလုပ်ရအောင် ကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ 🤗 ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်ကဘယ်လိုစရမလဲ မသိသူတွေကို ခရေစေ့တွင်းကျ ရှင်းပြသင်ကြားပေးပြီး မသိတာတွေအားလုံးကို သိသွားအောင် ကူညီပေးမှာဖြစ်လို့...
© Copyright - Winner Japanese Language, Web Designer - MWS